Kukhethwe yi-NASA, Lawa mathoyilethi amathathu aya enyangeni!
Ikhaya / Blog / Kukhethwe yi-NASA, Lawa mathoyilethi amathathu aya enyangeni!
2020 / 11 / 01 UkwahlukanisaBlog 6229 0
Ikhishi Nobhavu. Izihloko Zamakhishi Nezokugeza.
Ngo-Okthoba 22nd, i-NASA yamemezela imiphumela yalo mncintiswano, okwaholela ekukhetheni "izindlu zangasese zenyanga ezintathu", ngomklomelo wokuqala wama- $ 20,000 oya kowinile. Imiklomelo yemali yanikezwa eminye imingenelo emibili. Okunye ukungenela okuwinile bekungumklami weDeliffy, okwenza uDeliffy kube ukuphela kwenkampani yokugezela ezuze lo mklomelo.
丨 Umklomelo Wokuqala 丨
Yakhelwe Ngosizo Lwezinkanyezi Zabesifazane
Indlu yangasese yokuqala yokuwina umklomelo yaklanywa yithimba lokwakha izindlu zangasese i-Translunar Hypercritical Repository 1 (THRONE), eholwa ngunjiniyela waseWashington uBoone Davidson, nokwakhiwa kwendlu yangasese kwakususelwa eselulekweni sosomkhathi besifazane uSusan Helms.
Ukuhlekisa Ngokungena Komklomelo Wokuqala
USusan Helms owayengusomkhathi we-NASA wesifazane owayesebenza komunye wemishini evimba ukusebenza eyeka ukusebenza ngo-2011. Utshele ithimba elenza izindlu zangasese ukuthi osomkhathi besifazane banesikhathi esinzima kakhulu ukusebenzisa indlu yangasese uma kuqhathaniswa nosomkhathi besilisa abangamane basebenzise ithala ukuncela uchame. Ngalesi sizathu, i-THRONE yaklama i-Space Toilet, exazulula inkinga yosomkhathi besifazane abanobunzima bokusebenzisa indlu yangasese esikhaleni ngokwakha kabusha insimbi emise okofeleni ukuze ilingane kangcono nomzimba wesifazane.
USusan Helms, Owayengusomkhathi weNASA Astronaut
Ngaphezu kwalokho, ngokungafani nezindlu zangasese ezivamile ezisebenzisa ipompo yokuphefumula, iqembu LESIHLOKO lenze ithoyilethi lisebenzise umlandeli ongenalutho ukuthwala indle bese liyifaka esikhwameni esikhethekile sokuqoqa ukunciphisa ukuxhumana kosomkhathi nendle.
丨 Umklomelo Wesibili Pr Umklomelo Wesibili 丨
I-Fecal Matter Ingafakwa Esiqandisini Ibuyiselwe Emhlabeni
Umklomelo wesibili uye ethoyilethi eligoqekayo elenziwe nguThatcher Cardon noDave Morse. U-Thatcher Cardon ungukoloneli wase-US Air Force kanye nodokotela ohlinzayo wendiza owake wanqoba iHeroX Space Potty Challenge ngo-2017.
Le ndlu yangasese inesihlalo esihleliwe sendlu yangasese nomgodi ogqokiwe lapho kufakwa khona okokulala noma induku yokuhlanzeka yokuhambisa indle, futhi lapho kwenzeka ukungcoliswa, umlandeli omncane udonsela indle esikhwameni sokuqoqa, esingamiswa futhi sigcinwe kuze kube yilapho ibuyiselwa eMhlabeni. Njengoba lolu hlelo lwendlu yangasese alunasisindo esikhulu, lwehlisa isisindo sohlelo lokufika kwenyanga.
Indle ifakwa ngamapayipi esikhwameni seqoqo
丨 Umklomelo Wesithathu 丨
Umklomelo wesithathu yi-Space Toilet ngumklami kaTriffy uFranziska Wülker. Indlu yangasese inesakhiwo esime kahle futhi kuthiwa ikhululekile kwabesilisa nabesifazane. Njengoba isiteshi sasemkhathini singenawo amandla adonsela phansi, indlu yangasese isebenzisa i-centrifuge ekhethekile ukuncela indle, iyicindezele bese iyigcina ethangini nge-conveyor emise okomoya. Indlu yangasese nayo inesihlungi sokuqinisekisa ukuthi iphunga namagciwane awangeni kule ndlwana. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lokumpompa ithoyilethi luyazisebenza futhi lusebenza uma kwenzeka kucishwa ugesi, lujwayele izimo eziphuthumayo zesiteshi sasemkhathini.
Umklamo we-Deliffy Space Toilet
Umklami uFranziska Wülker
Ithoyilethi lisebenzisa ubuchwepheshe bangempela obakhiwe yiTrifi ukugcina isisindo namandla esetshenziswa ngaphansi kwamazinga abekwe yiNASA. Futhi ekwakhiweni, abaklami basebenzise isoftware yokuklama yomkhakha wezimoto, i-aerospace, njll., Engalingisa ngokusobala izimo zokugeleza kwamanzi, futhi nayo esetshenziselwe ukuthuthukisa ubuchwepheshe beTrifi's Rimless. UThomas Stammel, oyiChief Technology Officer yakwaTrifi, uthe inkampani iyaziqhenya ngokuthi uFranziskaWülker ukwazile ukuklama indlu yangasese, nokuyinto efakazela ubuholi bukaTrifi kubuchwepheshe bezindlu zangasese.
Osomkhathi On Inyanga Ngo-2024 May Sebenzisa Izindlu Zangasese Ezintsha
Ngo-Okthoba nonyaka, i-NASA yamemezela izinhlelo zakamuva zohlelo lwenyanga "luka-Arthemisi", olwaluhlelelwe ukuthumela owesifazane wokuqala nowesilisa wesibili enyangeni ngo-2024. Uhlelo lonke ngezinyathelo ezintathu, kulindeleke ukuthi lubize u- $ 28 billion, okuyizigidi ezingama- $ 16 zokuthuthukisa imodyuli yenyanga.
Imininingwane iveze ukuthi lapho osomkhathi befika okokuqala enyangeni ngoDisemba 1972, iNASA ayizange ibakhethele indlu yangasese efanelekile, ngakho-ke kwakungasetshenziswa amanabukeni ngaleso sikhathi. Yize kamuva i-NASA yaklama ithoyilethi elikhethekile lesiteshi sasemkhathini, kodwa osomkhathi kudala bekungabantu besilisa ikakhulu, kufaka phakathi isiteshi sasemkhathini, imikhumbi-mkhathi, amasudi esikhala, njll. Ukuthuthukisa umbono wesilisa. Kodwa-ke, isibalo sosomkhathi besifazane abavela emazweni ahlukahlukene besilokhu sikhula eminyakeni yamuva nje, kanti iNASA nayo ihlose ukuthumela osomkhathi besifazane enyangeni eminyakeni emine. Kuze kube manje, ukuhlangana kokubili osomkhathi besilisa nabesifazane ngaphandle kwendlu yangasese yoMhlaba kudinga ukuba khona.
Izazi Zasemkhathini ZaseJapan Zigcina Amathoyilethi Esikhala
Osomkhathi baseMelika Bafunda Amathoyilethi Emkhathi.
Eqinisweni, amathoyilethi anjalo esikhala asevele asetshenziswa ezikhungweni eziningana zomhlaba, kepha le mikhiqizo yenzelwe i-microgravity kuphela, ngakho-ke ukwakhiwa kwamathoyilethi omkhathi wokusetshenziswa enyangeni kwaba okungenakugwemeka. Kungalesi sikhathi okwazalelwa kuso iSpace Toilet Contest yeNASA, futhi sikholelwa ukuthi osomkhathi bazokwazi ukusebenzisa la mathoyilethi anqobayo.
Edlule :: Uyazi ukuthi ungahlobisa kanjani indlu yangasese edume kakhulu e-Sunken Ngo-2020? Olandelayo: Umbiko we-2020 US Bathroom Trends: Amathoyilethi ahlakaniphile, ompompi bezinzwa, namakhabethe angokwezifiso okugeza azoduma!
Egumbini lokugeza laseJapan, iKhabinethi Yethawula Lizacile Libe Amasentimitha Ayishumi, Isitoreji Sicocekile
2021 / 01 / 16 2630
Noma ngabe Igumbi lokugezela lingaphansi kwamamitha ayisikwele ama-5, ukwahlukanisa okumanzi nokomile kungu-N ...
2021 / 01 / 15 1791
2021 / 01 / 15 1914
2021 / 01 / 11 2814
2021 / 01 / 11 2179
2021 / 01 / 11 2561